Aretina omby: fampahalalana momba ny aretina tongotra sy vava amin'ny omby, sns.-BALLYA
Brucellosis amin'ny omby
Lisitry ny atiny: Inona ny brucellosis amin'ny omby? Inona avy ireo soritr'aretin'ny brucellosis amin'ny omby? Inona no mahatonga ny brucellosis amin'ny omby? Ahoana ny fitsapana ny brucellosis amin'ny omby? Ahoana no hitsaboana brucellosis amin'ny omby? Ny anjara asan'ny vaksiny amin'ny brucellosis Ahoana no hisorohana ny aretina amin'ny brucella amin'ny omby? Ahoana no hifehezana ny omby voan'ny aretina sy hialana amin'ny fiparitahana […]
Tandremo ny aretina mahazatra an'ny ombivavy be ronono!
Ny omby vita amin'ny ronono dia masinina famokarana ary tanjona ahazoan'ny fiompiana omby omby, fa amin'ny fitantanana famahanana tena, ny omby dia hijaly noho ny aretina mitaiza noho ny fanaraha-maso tsy mendrika ataon'ny mpiompy omby, izay hitondra fatiantoka ara-toekarena lehibe amin'ny fiompiana omby. Noho izany, nampahatsiahy ny manam-pahaizana fa tsy maintsy manao asa tsara ny fiompiana omby […]
Ahoana ny fomba hitsaboana torsion utérine amin'ny ombivavy be ronono?
Ny torsion utérine bovine dia manondro ny torsion (fihodinana) ny tranon-jaza bevohoka iray manontolo, lafiny iray amin'ny zoron'ny tranonjaza manodidina ny axis longitudinal, miaraka amin'ny torsion ny vozon'ny tranon-jaza sy ny fivaviana aloha. Ny ankabeazan'ny toerana miolikolika dia ny vozon-tranonjaza sy ireo faritra eo alohany sy any aoriana. Ny trangan'ny fiviliana miankavanana dia […]
Fitsaboana manokana ho an'ny aretina ombivavy be ronono tokony ho fantatrao
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona dia mitombo ny fangatahan'ny olona ny ronono ary ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fiompiana ronono dia nampiroborobo indrindra ny fiompiana kely any ambanivohitra. Ny fitomboan'ny ombivavy be ronono dia tsy azo ihodivirana hitondra aretina maro, ka ny fitsaboana ireo aretina ireo dia nanjary olana lehibe atrehin'ireo mpiompy ronono any ambanivohitra […]
Ahoana ny fomba hisorohana ny aretina lohataona amin'ny ombivavy be ronono
Ny toetrandro amin'ny lohataona dia miova. Amin'ny dingan'ny fiompiana ronono, raha tsy ao an-trano ny fitantanana famahanana dia hijaly amin'ny aretina isan-karazany ny omby. Noho izany, ny tantsaha mpamokatra ronono dia tokony hahafantatra ireo endrika klinika amin'ny aretina marobe amin'ny lohataona, manamafy ny fisorohana ny aretina lohataona amin'ny ombivavy be ronono, ary manatsara ny teknika fitantanana […]
Misy fiantraikany amin'ny ronono ve ny aretina atodinaina ao amin'ny ombivavy be ronono?
Ny etiology sy ny famaritana ny aretina atodinaina dia manome soso-kevitra fa ao amin'ny toeram-pitsaboana, ny aretin'ny oviana dia iray amin'ireo aretina mahazatra indrindra amin'ny fiterahana, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fampinonoana sy ny fiterahana ombivavy be ronono ary niteraka fatiantoka lehibe teo amin'ny indostrian'ny fiompiana ronono. Satria sarotra ny etiology ny aretina atodinaina, […]
Misy fiantraikany amin'ny ronono ve ny mastitis an'ny ombivavy be ronono?
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fiompiana ombivavy be ronono dia matetika mitranga ny aretina toy ny mastitis, hysteresis ary ny fivontosana ravina hoof. Raha tsy voatsabo ara-potoana dia hitondra fatiantoka ara-toekarena ho an'ny tantsaha mpamono ronono izany, ka hisy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny indostrian'ny ronono. Ny fomba fisorohana sy fitsaboana mahomby amin'ireo aretina telo ireo dia ampidirina […]
Aretina mahazatra amin'ny ombivavy be ronono tokony ho fantatrao
Ny fomba fitiliana aretina dia azo zaraina amin'ny fomba diagnostika ankapobeny sy fomba diagnostika manokana. Ny fomba fitiliana ankapobeny dia ny fizahana, ny auscultation ary ny olfaction. Ny votoatin'ny famaritana maso dia ny fandinihana ireo aretina amin'ny maso mitanjaka. Noho izany, ny fampiharana ny areti-maso dia nanaporofo fa ny fahitana maso dia fomba tsotra sy sarobidy […]
Inona no aretina mahazatra indrindra amin'ny ombivavy be ronono?
Manodidina ny 220 tapitrisa ny omby ronono eto an-tany amin'izao fotoana izao, ary ny ampahatelony amin'izy ireo dia manana karazana mastitis isan-karazany, ary ny fatiantoka isan-taona noho ny mastitis dia mahatratra 35 miliara dolara. Amin'ny famokarana, ny mastitis omby dia miteraka fihenan'ny famokarana ronono, fihenan'ny kalitaon'ny ronono vaovao, ary ny fanafoanana […]
Manimba ny ombivavy be ronono ve ny aretina hoof?
1. Aretin-tongotra Azo zaraina ho saprophytic, interphalangeal dermatitis, hoof ulc, horsosion soavaly fihorakorahana, fanenenan-tsoavaly, abscess tsipika fotsy, sns. aretina mifangaro amin'ny Nectobacillus sy Pseudomonas melanogenesis, ary koa, misy sela bakteria manan-danja hafa dia Provera, ilay […]
Ahoana ny fomba hisorohana sy hitsaboana ireo aretina amin'ny ronono?
Hisy aretina amin'ny fizotry ny fiompiana omby. Sarotra be amintsika ny manafoana ny mikraoba. Tandremo fotsiny ny fitantanana antsipiriany isan-karazany mba hampihenana ny fisian'ny aretina. Ny fisorohana sy ny fifehezana ny aretin'omby dia mitovy ihany koa. Ireto manaraka ireto dia ny fomba fisorohana sy fitsaboana amin'ny aretin'ny ronono: 1. […]
Firy ny aretina mahazatra ananan'ny ombivavy be ronono?
Firy ny aretina mahazatra ananan'ny omby? Ny aretina mahazatra an'ny ombivavy be ronono dia misy mastitis omby, tongotr'omby ary aretin-tongotra, tsy fiterahana omby, soritr'aretin'ny fivalanana amin'ny zanak'omby, famindrana ketrona ary tsy fiterahana plasenta. 1. Fisorohana sy fitsaboana ny mastitis omby Ny mastitis no aretina fahita indrindra amin'ny fiompiana omby aman-dronono. Amin'ny ankapobeny, mastitis amin'ny klinika matetika dia mitarika amin'ny […]